आजाद कश्मिरका २७ औं राष्ट्रपती के भन्दछन् ? « LiveMandu
आजाद कश्मिरका २७ औं राष्ट्रपती के भन्दछन् ?
१५ फाल्गुन २०७५, बुधबार १७:१६
भारतपाक सम्बन्धका कुरा र शान्तिका पहलका कुरामा पाकिस्तान शाषित काश्मिरका बासिन्दाले के भन्दछन् त ? यस कुरा र उनीहरुको आवाजको उति चासो खासै दुबै सरकारहरुले देखाँउदैनन् ।
पाकिस्तान शाषित काश्मिरका २७औं राष्ट्रपती अनि लोकप्रीय नेता मसुद खानको भर्खरै दुबई भ्रमणका समयमा अलजजिराले एउटा अन्र्तवार्ता लिएको थियो, आज लाइभमाण्डुमा प्रस्तुत छ जस्ताको तस्तै ।
पलुवामा आक्रमण पछिका घटनाक्रममा तपाँईको विचार के छ ?
भारत आगोसंग खेल्दै छ र कश्मिरका जनताहरुलाई निकृष्ट आक्रमण गर्दैछ । सबै काश्मिरीहरु आतंकवादी हैनन र हामी अतिनायकवादी पनि हैनौं, हामी शान्ति चाहन्छौं जुन दुबै देशले बुझ्न सकेका छैनन् । पलुवीमा आक्रमणमा बिना कुनै आधार र प्रमाण पाकिस्तानलाई तानिनु गलत हो । गएका ७१ वर्षमा यस क्षेत्रमा लाखौंको ज्यान गयो, हजारौं महिलाहरु बलात्कार र यौन दुव्यबहारमा परे त्यसको हिसाब कुन देशले दिने ? अहिलेकै अवस्थामा पनि करिब ६००० पाकिस्तान सटगनको छर्राले दृष्टिविहिन र अर्ध दृष्टिविहिन भएका छन् । भारतले कश्मिरमा एकै पटक दुईवटा कानुन लागु गरेको छ, पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए र आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एएफएसए जस्ले गर्दा जनतामाथि सेनाको दमन र मानव अधिकारको उल्लँघनलाई प्रोत्साह मिल्दछ । एमनेस्टी इन्टरनेशनलले कश्मिरमा भारतले लगाएको कानुनी प्रावधानलाई गलत बताँउदै कानुनको कमी भनेको छ । बेलायतसंगको उपनीवेशबाट छुट्कारा पाउन लामो संघर्ष गरेको देश भारतले काश्मिरलाई भनें उपनीवेशका रुपमा शासन गर्नु गलत हो ।
के पाकिस्तान शाषित क्षेत्रका कश्मिरिहरु युद्धको त्रासमा छन् त ?
भारतीय हमलाको बिरोध र सरकारलाई प्रतिशोध र प्रतिउत्तर दिन दबाब दिने कार्य पाकिस्तानी क्षेत्रको कश्मिरमा पनि भइरहेको छ ।
तथापी हामी युद्धको बिरोधमा छौं र चाहन्छौं कि भारत अहिले पनि पछाडी हटोस् र युद्ध नहोस् ।
पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्र संघलाई सहजीकरणका लागि गरेको अपिल हाँस्यास्पद भन्ने तर्कहरु आइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?
विश्वकै चलन हो, जबजब देशहरु बिच समस्या र मुद्धाहरु आएर समाधान हुन्न तब यूएन लाई गुहार गरिन्छ । शान्ति स्थापनाको कार्य यूएनएससी यूनाइटेड नेशन्स सेक्यूरिटी काउन्सीलको दायित्व हो । यो पाकिस्तानी हाँस्यास्पद हैन किनकि विश्वनै यी दुई आणविक हतियार सहितको देशहरुको युद्धको चपेटामा सकंटमा पर्नेछ । युद्धलाई रोक्नै पर्दछ ।
के कश्मिर दुई देशहरु बिचको सानो मिठाई भएको हो र ?
हेर्नुहोस कश्मिर सानो छैन । २ लाख २० हजार स्क्वायर किमी क्षेत्रफल भएको कश्मिरमा २ करोड आवादी छ, के यो सानो हो ?
भारत शाषित कश्मिरमा शसिन मल्लीकको नेतृत्वको म समर्थन गर्दछु, त्यहाँ कुनै समस्या छैन । यता पाकिस्तान शाािष्त कश्मिरमा पनि केहि समस्या छैन, हामी कुनै देश भन्दा पनि शान्ति र मानवताको समर्थन गर्दछौं ।
त्यसोभए कश्मिर यि दुबै देशहरुबाट अलग र पृथक राज्य हुन पर्दछ त ?
मलाई ठ्याक्क शब्द थाहा छैन तर पाकिस्तानको इस्लामावाद र यहाँ कै मुजफ्फरवादमा भएका प्रेस कन्फेरेन्समा पृथकतावादी नाराहरु गुन्जीए तथापी यसरी नारावाजी गर्नेहरुलाई पाकिस्तानी सरकारले जेल चलान गरेन । भारत शाषित कश्मिरमा पनि यसिन मल्लीकको नेतृत्वमा निकै राम्रा कामहरु भएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति कार्यक्रममा मल्लीक निकै सक्रिय छन् तथापि यूएनएससी ले कश्मिरलाई भारत या पाकिस्तान मध्य कुनै एकको अधिनमा भएर मात्र समाधान हुने बताँउदछ । मलाई लाग्छ यो मुद्दा काश्मिरीहरुले सुल्झाउन सक्नेछन्, आजाद कश्मिरमा कुनै देश या जात या धर्मको विभेद हुने छैन ।
अलजजिराका लागि मसुद खानको अन्तर्वाताको साराशं, केहि कुरा थप स्पष्ट पार्ने हेतुले सम्पादन गरिएको छ ।
पाकिस्तानले भर्खरै भारतको दुइवटा जेट फाइटर खसाल्यो